Xukuumadda oo balan qaaday daryeelka dhaawacyadi Shalay. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka Booliiska Dalka ayaa xalay Isbitaalada Muqdisho ku booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii ay Al-Shabaab shalay ku qaadeyn Xarunta ay daganaayeen Wasaarado ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Dowladda ay ka faala qaadeyso Daryeelka dadkii wax ku noqday Weerarkii ka koobnaa dagaalka iyo Qaraxyada ay Al-shabaab ku qaadeyn Xarunta OTO OTO ee u dhaw Taalada Siyadka ee magaalada Muqdisho.
“waxaana idin kala wareegeynaa hadii aan nahay Dowladiina daryeelka dadkii wax ku noqday Muusabadii Al-Shabaab ay ka geesteen magaalada Muqdisho, inta ku geeriyootay alle ayaa naxariis uga baryeeynaa dhaawacana sidoo kale alle ha noo booga dhayo” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa shalay weerar culus ka geystay Xarunta Wasaaradda Arimaha Gudaha ee OTO OTO oo ay sidoo kale dagan yihiin Xarumo kale oo ay ka mid tahay Wasaaradda Amniga iyo Taliska isku xirka Booliiska Soomaaliya.
Muddo kadib maxaa keenay in qaraxyo iyo weeraro toos ah ay ka dhacaan Muqdisho?.